I-Leacree Brand - LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.
Izinhlamvu ze-LEACREE zingamagama ayinhlanganisela Okuholayo Nokudala.Ibonisa isimo seBrand "sokuhola nokusungula".
U-LEACREE ubelokhu enamathela emibonweni yokuthuthukiswa kwebhizinisi "Ikhwalithi YokuQala, I-Technology Innovation, Ukwaneliseka Kwekhasimende" ukuze ahlanganyele ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekukhiqizeni nasekukhangiseni kwekhwalithi ephezulu yezimoto ezishaqisayo nama-struts neminye imikhiqizo yokumiswa.
Njengomkhiqizi wokumiswa kwezimoto oqinisekisiwe we-ISO9001/IATF 16949, i-LEACREE ihlale yengeza futhi yandisa ulayini womkhiqizo wethu kanye nokuhlanganisa.Ngaleso sikhathi, sinikele ngamandla ethu ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni izinto ezishaqisayo zokumiswa ezisezingeni eliphezulu nezisezingeni eliphezulu ukuze sithuthukise ulwazi lokugibela lwabanikazi bezimoto emhlabeni wonke.
Isiko elithi "Okuholayo, Indalo, Ukwethembeka kanye Nokuphumelela" kuwumphefumulo womkhiqizo we-LEACREE, okuwumgogodla wentuthuko eqhubekayo yebhizinisi.
Isimo sengqondo “sokuhola” senza u-LEACREE ahlale esezingeni eliphezulu lokushaqeka kwe-aftermarket & struts ngokusebenzisa ubuchwepheshe obuphambili nezinto zokusebenza ezithuthukile.
U-LEACREE ngokuqhubekayo uphishekela ukuqamba okusha kwezobuchwepheshe, isevisi, ukuphatha, ukuthengisa futhi aqhubeke nokwenza ngcono ikhwalithi yomkhiqizo.Ukuze kuthuthukiswe imikhiqizo ehamba phambili, entofontofo, evumelana nemvelo futhi ephephile, i-LEACREE isungule izikhungo ze-R&D zezicelo zobuchwepheshe ezinezikhungo ezidumile zocwaningo lwesayensi namanyuvesi e-China nakwamanye amazwe.
Ngentengo esobala, ikhwalithi ephezulu, ukuqinisekiswa kwekhwalithi, ngaphandle kokukhathazeka ngemva kokuthengisa, i-LEACREE isebenzela amakhasimende ethu ngenhliziyo yonke.
U-LEACREE uhlale ezibophezele ekuzuzeni umphumela wokuwina ngabasebenzisi bokugcina, amakhasimende nabahlinzeki.
IChina Shock Absorbers IAir Suspension Strut ICar Air Bags Ukumiswa Ukumiswa Komoya Qedela iStrut Assembly Complete Struts